‘ह्याङ’ भएको मोवाइललाई के गर्ने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार ‘ह्याङ’ भएको मोवाइललाई के गर्ने ?
‘ह्याङ’ भएको मोवाइललाई के गर्ने ?
२०७८, २९ श्रावण शुक्रबार १५:०४
अहिले ओएस अर्थात एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएका स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । तर, यस्ता फोनमा भाइरसको आक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ । यस्ता फोनमा भाइरसले कुनै न कुनै तरिकाले आक्रमण गर्न सक्छ । यी भाइरसले स्मार्टफोनको डाटामा हानी पुर्याउन सक्छ । त्यसैले, यस्ता भाइरसलाई हटाउनै पर्छ । तर, कसरी ?
पहिले आफ्नो मोबाइलको सेफ मोडमा रिबुट गर्नुहोस् । यो गर्दा एप्ससँगै सक्रिय भाइरस तत्काल हट्छ । यदि सेफ मोड रिबुटको अप्सन नदेखिए पावर बटन केहीबेर दबाउदा रिबुटको अप्सन आउँछ । त्यसैलाई सेलेक्ट गरी मोबाइल रिबुट गर्नुहोस् ।
अब मोबाइल रिस्टार्ट भएपछि सबैभन्दा पहिले डिभाइस सेटिङमा गएर एप्स अप्सन ओपन गर्नुहोस् । त्यहाँ मोबाइलमा इन्स्टल भएका सबै एप्स देखिन्छ । यो समय कुनै पनि एप्स रनिङ मोडमा हुँदैन । यहाँ भाइरस रन भएको छ भने पनि देखिन्छ । यो सुचीमा कुनै भाइरस पत्ता लाग्यो भने तत्काल अनइन्स्टल गर्नुहोस् । अनइन्स्टलमा क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिनुहोस् ।
कहिलेकाहीँ भाइरस अनइन्स्टल गर्ने अप्सन नहुन सक्छ । यो अवस्थामा डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेटिङमा जानुपर्छ । डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेटिङमा जानुहोस् र जहाँ इन्स्टल भएका एप्सका पूरै लिस्ट देखिन्छ । यीमध्ये जुन एप तपाईंलाई काम लाग्दैन, त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस् । यसका लागि स्क्रिनमा देखिएको विन्डोमा डिएक्टिभेटको अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोस् ।
अब अनावश्यक एप हटाइदिएपछि एकपटक फेरि नर्मल मोडमा रिस्टार्ट गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंको डिभाइस सेफ मोडबाट बाहिर आउँछ भने भाइरस पनि हट्छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
Previous articleपहुँचवाला ठेकदारको बदमासीले म्याग्दीका ठुला योजना अलपत्र
Next articleप्रधानाध्यापकको दुई सय रोपनीमा खोर्सानी खेती